Wiil ganacsade ah oo lagu dilay Bosaso – Radio Daljir
Wiil ganacsade ah oo lagu dilay Bosaso
Diseembar 8, 2018 6:21 g 1
Kooxo hubaysan ayaa rasaas ku furay wiil la sheegay inuu ka mid ahaa ganacsatada yaryar ee magaalada Bosaaso.
Rasaaasta ayaa sababtay dhaawac uu markii dambe ugu geeriyooday isbitaalka guud ee Bosaso.
Qofka dhintay ayaa magaciisa lagu sheegay Shaafici.
Ciidamada ammaanka ayaa dhacddada dilka kadib gaaray goobta oo ahayd laamiga Bosaaso ee u dhow suuqa wayn ee Bosaso.
Majirto wax fahfaahin ah oo kasoo baxay ciidamada ammaanka.
Beelo 7sano ku dagaalamayay degmada Taleex oo heshiis lakala dhex dhigay (dhegayso)
Galgala ISIS-ta Ku jirta waa ilma Netanyahu.
Islaamnimana shaqo kuma leh.iska jir!!.
Waa kooxo la caalamiyeeyey oo loo samaystay ceebaynta diinta Islaamka.
ISIS=Israeli toilet paper,go fuck your self.